Maalinta: Sebtember 28, 2017
Sahin waxa uu soo bandhigay barnaamijka "Gazibis"
Nidaamka Gazibis, oo uu aasaasay Gaziulaş oo uu socday baaritaan muddo ah, ayaa loo bandhigay muwaadinnimada iyada oo ay ka qaybqaadanayaan Duqa Magaalada Gaziantep Fatma Şahin. In la kordhiyo adeegsiga muwaaddiniinta, gaar ahaan jiilka da'da yar [More ...]
TÜLOMSAŞ ayaa sidaas yidhi
TULOMSAS, waa horjoogayaasha nidaamyada tareenka, waxay u janjeedhaa hawada, waaxda badda iyo waaxda difaaca. TÜLOMSAŞ, oo u shaqeeya sidii kacaan wadareed Ray ee nidaamyada tareenka isla markaana ku saabsan ciribtirka ku tiirsanaanta waddamada shisheeye, ayaa iskaashi la leh warshadaha duulista, badda iyo warshadaha difaaca. [More ...]
biirto ee Siemens iyo Alstom kaa caawin doontaa in Turkey
Shirkadda samaysa tareenka Faransiiska ee Alstom iyo qaybta tareenka Siemens ayaa ku biirtay xoogag ka soo horjeeda khatarta sii kordheysa ee Shiinaha. Midnimadan ayaa ka faa'iideysan doonta shirkadaha Turkiga ee alaabada siiya Faransiiska. Alstom oo ay la socoto shirkadda soo saarta tareenka caanka ku ah Faransiiska [More ...]
Qoritaanka TCDD 700
Ku dhawaaqida shaqaalaysiinta TCDD ayaa la filayaa. Ku dhawaaqida shaqaalaysiinta shaqaalaha TCDD 700 ee uu ku dhawaaqay Wasiirka Gaadiidka Ahmet Arslan waxaa si weyn u sugaya musharixiinta. Goorma ayay shaqaalaysiinta shaqaalaha dawladda ee jidadka tareenka? Republic of Turkey [More ...]
Ka taxadar Uludag
Uludağ waa mid kamid ah xarumaha muhiimka ah ee xilliga qaboobaha iyo dalxiiska dabeecadda. Uludağ waa mid kamid ah xarumaha muhiimka ah ee xilliga qaboobaha iyo dalxiiska dabeecadda. 140 cabin [More ...]
Maxaa ku dhacay mashaariicda Sumela Monastery Ropeway?
Duqa Magaalada Maçka Koçhan wuxuu yiri, 3 wax horumar ah kama aysan soo saarin sanadkan ”mashruuca xarig-jarka, kaas oo la go’aamiyay in laga dhiso Kaniisadda Sumela 3 sano ka hor. [More ...]
Ka shaqeynaya Başkentray ma joojinayso xawaare
Shaqooyinka mashruuca BAŞKENTRAY, oo kala goyn doona qadka magaalada iyo Xawaaraha Sare iyo howlgalada caadiga ee tareenka caasimada Ankara una adeegi doona heerarka metro ee qadka Sincan-Kayaş, waa maalin iyo habeen. TCDD Guud [More ...]
Bandhiga Warqadda Ka Furay Malatya Gar
Injineer Amiin Ömer Özdemir, oo ka soo shaqeeyay kuxigeenka Agaasimaha Adeegyada Taageerada TCDD 5.Region Directorate, wuxuu soo bandhigay shaqadiisa gargaarka waraaqaha ee 50 ee Malatya Gar muddo hal sano ah. Wadada Tareenka iyo [More ...]
Sida shabakada xadiidka xawaaraha sare iyo xawaaraha sare, Arifiye, mid ka mid ah xarumaha YHT ee loo dhisay si loo daboolo baahida sii kordhaysa ee rakaabka, waxaa lagu dhisay xarun tareen oo casri ah YHT Station. Maareeyaha Guud ee TCDD İsa Apaydın, General [More ...]
Ankara-Istanbul YHT si loo xoojiyo xawaaraha T 26
Shaqada ayaa ka socota tareenka T-26 ee u dhaxeeya Bilecik-Bozuyuk oo ka tirsan Tareenka Xawaaraha Sare ee Ankara-Istanbul. Maareeyaha Guud ee TCDD İsa Apaydın, Shaqada dhismaha ee loo yaqaan 'T 26 ee tunnel' ee horumarka ayaa baaritaano lagu sameeyay. Apaydın in; Maareeyaha Guud [More ...]
Kusoo dhaweynta Tareenka Baasaboorka Tallaabo tallaabo
Bursa-Ankara iyo Bursa oo u dhexeeya Istanbul 2 Saacad 15 iyo xarumo safar oo raaxo leh ayaa bixin doona mashruuc dhakhso ah oo ku yaal Bursa oo sii shaqeynaya. Maareeyaha Guud ee TCDD İsa Apaydın, shaqada dhismaha ee horumarka [More ...]
Iyada oo la raacayo go’aanka ka soo baxay waftiga Iran RAI iyo TCDD ee 31 May 2017 shirkii Ankara, wufuudda labada dal ayaa ku shiray 18-19 Sebtember 2017 ee Malatya. Maareeyaha Gobolka 5 isagoo matalaya TCDD [More ...]
Nidaamka Saxeexa ee Tarjumaada Gaadiidka ee BTK Tareenka
Wasiirka UDH Ahmet Arslan, Wasiirka Dhaqaalaha iyo Horumarinta Joogtada ah ee Georgia Giorgi Gakharia, Madaxweynaha Azerbaijan Railways Cavit Gurbanov Tijaabada waxaa lagu qabtay Mashruuca Tareenka ee Baku-Tbilisi-Kars inta udhaxeysa Tbilisi-Kars [More ...]
Rakaabka koowaad ee mashruuca Tareenka BTK ayaa yimid Kars oo ka yimid Georgia
Mashruuca caalamiga ah ee Baku-Tbilisi-Kars Railway (BTK), kaas oo la soo gabagabeeyey intii lagu jiray wejiga imtixaanka, 27 waxaa la bilaabay Sebtember 2017 safarka ugu horreeya ee tareenka laga bilaabo Georgia ilaa Kars. Laga bilaabo saldhigga Ahılkelek ee Georgia ilaa Kars [More ...]